वामदेवका लागि कति सुरक्षित छ काठमाडौं – ७ ? यस्तो देखियो जोडघटाउ – Pradeshi Online
२३ असोज ,
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बन्ने ७५ प्रतिशत पक्का जस्तै भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट दुई पटकसम्म सानदार मत लिएर विजयी भएका रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि क्षेत्र नं. ७ छाड्ने भएपछि एकाएक नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ पूर्वएमालेको गढ नै मानिन्छ । यो क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर छ । कमजोर भएकी कारण प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा कांग्रेसले राप्रपालाई छाडिदिएको थियो । कांग्रेसले छाडेपछि मानन्धरलाई जित्न झन् सजिलो भएको हो ।
यो क्षेत्रबाट नेकपाका नेता गौतम उम्मेदवार बने भने कांग्रेसले सजिलै नछाड्ने संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहका सहयोगी यूपी लामिछानेले काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा पहिला संगठन कमजोर भए पनि अहिले सुधार गरेको दाबी गरे । ‘पहिला हामी काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा कमजोर थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले संगठन राम्रो बनाएका छौँ ।’
काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, सांसद भीमसेनदास प्रधान, जिल्ला सभापति सवुज बानियाँको घर पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि ‘वामदेव गौतम जहाँबाट उम्मेदवार बनेपनि कांग्रेसले हराइदिने’ सार्वजनिक रुपमा चेतावनी दिइसकेका छन् ।
नेकपा नेताहरु के भन्छन ?
सांसद मानन्धरले गौतमलाई सांसद बनाउन राजीनामा दिए भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पूर्वएमालेका नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा उप–निर्वाचनका बेला गौतमको पक्ष माहोल नजान पनि सक्छ ।
नेता गौतम आफ्नै गृहजिल्ला बर्दियामा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । गौतमले आफूलाई हराउन पार्टीकै नेताहरूले भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी मुख्यालयमा उजुरी समेत दिएका छन् । उपनिर्वाचनका बेला गौतमलाई पार्टीका केही नेताहरूको असहयोग नहोला भन्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा गौतमलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ पनि उपयुक्त नहुन सक्छ । नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्न सजिलो छ । तर, गौतमले राष्ट्रिय सभामा भन्दा पनि प्रतिनिधि सभालाई तोकका छन् ।
यसबाट के बुझीन्छ ?
राष्ट्रिय सभाको सांसद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधि सभाकै सांसद बन्नुपर्छ । सोही कारणले पनि गौतमले प्रतिनिधि सभा ताकेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकै कारण गौतम प्रतिनिधि सभामा आउन ठूलो जोडबल गरिरहेका छन् ।
गौतम प्रतिनिधि सभामा आउनेवित्तिकै वर्तमान सरकारलाई पाटीभित्रैबाट समस्या आउने धेरै नेताहरूको बनाइ रहेको एक नेताले बताए ।
डोल्पा र बाँकेबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई राजीनामा गराउन असफल भएका गौतमले मानन्धरलाई राजीनामा गराउन कन्भिन्स गरेको स्रोतको भनाई छ ।
नेकपाका सांसद मानन्धरले गौतमका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ छाड्न तयार भएको पत्र ‘प्रचण्ड’ले सोमबारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गौतमले मानन्धरलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नुका साथै मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सांसद मानन्धर बालाजुस्थित अष्टनारायण चलचित्र मन्दिरका मालिकसमेत हुन् ।
पुर्व एमालेको गढ
मानन्धरले तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री एवम् राप्रपा नेता विक्रमबहादुर थापालाई ८ हजार २३ मत अन्तरले पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभाको सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । मानन्धरले १८ हजार १ सय २ तथा थापाले १० हजार ७९ मत पाएका थिए ।
मानन्धरले यसअघि २०७० सालमा सम्पन्न दास्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी नेत्री हिसिला यमीलाई पराजित गरेका थिए ।
आज बस्ने भनिएको (नेकपा) को बैठक बस्न नपाउँदै स्थगित , कारण यस्तो छ ..